android ဖုန်းများအတွက်အမ်ပီယာမီတာ app ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အသုံးအဆောင်များ Apps ကပ » အမ်ပီယာမီတာ
အမ်ပီယာမီတာ APK ကို
သငျသညျတာဝန်ခံပေါ်တွင်တင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအမ်ပီယာ charger ကိုလက်ရှိမည်မျှ mAH လက်ရှိအားသွင်းလက်ခံရရှိပြီးဘက်ထရီသတင်းအချက်အလက်ခံကြောင်းကိုသင်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ အမ်ပီယာ charger ကိုလက်ရှိမကောင်းတဲ့အားသွင်းကိရိယာကို အသုံးပြု. ထံမှသင်တို့တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစကို USB cable သို့မဟုတ်အားသွင်း (AC / ကြိုးမဲ့) နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာမည်မျှ mAH လက်ရှိမိုဘိုင်းဖုန်းများအားသွင်းယူကြောင်းအကြောင်းကြား။
★ Widget လေး
သင့်ရဲ့ဘက်ထရီကိုအပြည့်အဝတာဝန်ခံသို့မဟုတ်အနိမ့်သို့မဟုတ်နေပူသောအခါအ amp charger ကိုလက်ရှိသင်အားအသိပေးပါ။ သင်တို့သည်လည်းဘက်ထရီအဆင့်နှင့်အများအပြားစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
အမ်ပီယာအားသွင်းရေစီးကြောင်းအများဆုံးတိကျစွာအချိန်နှင့် Volt အားသွင်းတိုင်းတာ။ သို့သော်သူကအားသွင်းကိရိယာသင့်ရဲ့ device ကိုအဘို့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့်အကဲဖြတ်ရန်သာကောင်းလှ၏
MA အတွက် charger ကိုလက်ရှိအရာများစွာကိုပေါ်မူတည်:
- အားသွင်း (ကို USB / AC / ကြိုးမဲ့)
- ကို USB cable ကို
- Display ကိုအရောင်အဝါ
- Wi-Fi ပြည်နယ်
အမ်ပီယာ charger ကိုလက်ရှိအန်းဒရွိုက် 4.0.3 + ကိရိယာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သင့်လျော်တဲ့တိုင်းတာခြင်း chip ကို (သို့မဟုတ် interface ကို) ကင်းမဲ့သည့်ကိရိယာများရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှိသမျှ device ကိုထောက်ခံနေသည်မဟုတ်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မှာထောက်ခံမရနိုင်ပါ။
အမ်ပီယာ charger ကိုလက်ရှိအလွန်အလင်းကိုယ်တိုင်နှင့်စူပါ App ဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်းအနည်းငယ်သာဘက်ထရီစားသုံးနိုင်အောင်ဒီဇိုင်းရိုးရှင်းပါသည်။
* Plug အမျိုးအစား
* ဘက်ထရီ status ကို
ဘက်ထရီအတွက် charging ၏ * အကြွင်းအကျန်အဆင့်အထိ
ဖုန်းရဲ့ * မော်ဒယ်
ဖုန်းရဲ့ * Build ID ကို
android ဖုန်းစနစ်၏ * ဗားရှင်း
* API ကိုအဆင့်
တချို့ကမိုဘိုင်းဒါအမ်ပီယာ charger ကိုလက်ရှိသာ USB ကြိုးသို့မဟုတ် AC adapter တို့ကဟုတ်မဟုတ်အရင်းအမြစ်အားသွင်း၏အခြေခံပေါ်မှာလက်ရှိ၏စီးဆင်းမှုကိုခန့်မှန်း Ma အတွက်လက်ရှိအားသွင်း၏စီးဆင်းမှုကိုတိုင်းတာအတွက်ကူညီပေးသည်ပေးသောဆင်ဆာသို့မဟုတ် chip ကိုမရှိဘူး
* သံကို khi အပြည့်အဝဘက်ထရီ Play: ဘက်ထရီအပြည့်အဝဖြစ်ပါတယ်အခါသင်အကြောင်းကြားရန်
* သံကို khi အနိမ့်ကျထရီ Play: ဘက်ထရီနိမ့်သည်အခါသင်အကြောင်းကြားရန်
* သံကို khi ပူဘက်ထရီ Play: ဘက်ထရီပူသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအပူချိန်ပင်ဖြစ်သည်အခါသင်အကြောင်းကြားရန်
အမ်ပီယာ charger ကိုလက်ရှိနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့ဖုန်းများအတွက်: -
- LG ကပစ္စည်းတွေမှာအကြီးအလုပ်လုပ်
- HTC က M9, HTC One ကို M10, HTC One ကို M8 HTC သည် 10, Pixel
- က Samsung ကတော့ galaxy S4, နဂါးငွေ့တန်း S5, နဂါးငွေ့တန်း S6, နဂါးငွေ့တန်း S7, နဂါးငွေ့တန်း S8, နဂါးငွေ့တန်း S9
- အများစုမှာက Galaxy4မှတ်ချက် &3မော်ဒယ်များမှတ်ချက်
- အင်တာနေရှင်နယ်က Samsung Galaxy SIII (GT-I9300 & FT-I9305)
- တောင်ကိုရီးယားက Samsung Galaxy SIII (SHV-E210K / L / S) ကို
- က Nexus 5, Nexus 6, Nexus 6P
- Moto G Sony က XZ, LG က V20, Oppo F1s
ဒီ app တိကျ Ma ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ။ အားသွင်းကိရိယာ / USB cable ကို combo တူညီသောစက်ပေါ်မှာသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သောအကဲဖြတ်ဘို့ကသာကောင်းလှ၏။
ကျနော်တို့အသုံးဝင်သောဘက်ထရီသတင်းအချက်အလက်ကဲ့သို့အလွန်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာ features အသစ်, ဘက်ထရီချွေတာအကြံပေးချက်များအသစ် Widgets တွေ, ဘက်ထရီမော်နီတာအများအပြားပိုပြီးအတွက်ဖြည့်စွက်, amp charger ကိုလက်ရှိတိုးတက်စေရန်အဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
LiPo ဘက်ထရီကဖုန်းကိုအားသွင်းဖို့ကြာအပြည့်အဝအချိန်များအတွက်အများဆုံးဆွဲကြဘူး။ သင့်ရဲ့ဘက်ထရီနီးပါးအပြည့်အဝဖြင့်တရားစွဲဆိုလျှင်ထို့နောက် charging လက်ရှိနိမ့်ဘက်ထရီကိုအဆင့်ဆင့်အားဖြင့်သလောက်လျော့နည်းဖြစ်လိမ့်မည်။
- LiPo တာဝန်ခံအဆင့်ဆင့်ရှင်းပြတစ်ဦးကဂရပ်: Batteryuniversity.com/_img/content/ion1.jpg
Youtu.be/A6mKd5_-abk: - သင်ခန်းစာအားသွင်း Dave ရဲ့ (EEVBlog) LiPo
အမ်ပီယာ charger ကိုလက်ရှိလျှောက်လွှာအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Setup ကိုများနှင့်ပျော်မွေ့ !.
* က Android Oreo Compatibility ကိုတိုးမြှင့်မှုများ
* ခြုံငုံစွမ်းဆောင်ရည် Optimized နှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်။
* Fix bug ကို & တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
* အခမဲ့ Widget လေး